रोचक – News543Online
जब आफ्नै आमाले डिएसपी छोरालाई यसरी सलाम गरिन् तस्बिर भाइरल
August 22, 2021 adminLeaveaComment on जब आफ्नै आमाले डिएसपी छोरालाई यसरी सलाम गरिन् तस्बिर भाइरल
एक आमा बुबाको लागी यो भन्दा भाग्यशाली के हुन सक्छ ? जहाँ छोरा अधिकारी बनेर आउँछन् जहाँ उनकी आमा कार्यरत छिन् । गुजरात पुलिसमा एसआईको पदमा तैनात एक आमाको खुशीको कुनै सीमा थिएन जब एक अधिकारीको रूपमा उनको आफ्नै छोरा डीएसपी बनेर आए । उनले छोरालाई अधिकारीका रुपमा आएपछि कर्तब्य पुरा गर्दै सलाम गरिन् […]
बिहे भोजमा मासु नदिएको भन्दै झडप, १ को मृत्यु ३ जना घाइते
August 21, 2021 adminLeaveaComment on बिहे भोजमा मासु नदिएको भन्दै झडप, १ को मृत्यु ३ जना घाइते
कसैको विवाहमा जाँदा खाना मन परेन् भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? खाना कम खानुहुन्छ वा अर्को खाना मगाउनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईं खाना नै नखाएर फर्किन पनि सक्नुहुन्छ । तर भारतको बिहार राज्यमा जे भयो, त्यो अलिक फरक छ । कुखुराको मासुसँग लिट्टी नदिएको आरोपमा बिहारको गोपालगञ्ज जिल्लाको उचाकागाउँ थाना क्षेत्रको नरकटियामा लडाँई भएको छ । उक्त […]
महानायक राजेश हमाल भन्छन खोइ त मलाई बधाई देको
July 8, 2021 adminLeaveaComment on महानायक राजेश हमाल भन्छन खोइ त मलाई बधाई देको
नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालले आफु बाबु बन्न लागेको संकेत गरेका छन् । मधु भट्टराईसँग विवाह गरेका हमालले सामाजिक सञ्जालमा आफु बाबु बन्न लागेको संकेत गरेका हुन् । नायक हमालले आफ्नो इन्स्टाग्राममा श्रीमति मधुसँगको तस्बिर राख्दै लेखेका छन्, ‘१+१= ?’ । यदी उनी बाबु बन्न लागेको हुन् भने उनलाई ‘बाबु कहिले बन्नु हुन्छ ?’ भन्ने […]
April 23, 2021 adminLeaveaComment on बधाई छ ! ट्याक्सी चालककी छोरी अस्मिताले पाइन स्वीजरल्यान्डमा दुई करोड बराबरको छात्रवृत्ति
काठमाडौं । मासिक रू एक सयमा नेपालको सस्तो विद्यालय समता स्कुलमा पढ्दै आएकी अस्मिता अधिकारी विश्वको महंगो स्कुलमध्ये एकमा पढ्न पाउने भएकी छन् । संसारको महंगोमध्ये एक र सुविधायुक्क्त आइगलन कलेज स्वीजरल्याण्डमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएकी हुन् । जोन कर्लेटले १९४९ मा स्थापना गरेको आइगलन विश्वकै विशिष्टमध्येको एक हो । सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धिकी अस्मिता कक्षा […]
महिला बाट पुरुष बल्तकार पुरा पढनुहोस। उजुरि दिन नेपालगन्ज पुगे
April 9, 2021 adminLeaveaComment on महिला बाट पुरुष बल्तकार पुरा पढनुहोस। उजुरि दिन नेपालगन्ज पुगे
मंगलबार अपरान्ह साढे पाँच बजेतिर नेपालगन्जमा रहेको कालपृष्ठ दैनिकको कार्यालयमा एकजना ख्याउटे शरीर भएका मानिस रुन्चे अनुहारसहित आइपुगे । उनले काँधमा एक कालो झोला बोकेका थिए । शरीर फतक्क गलेको जस्तो देखिन्थ्यो । परिचय सोध्दा उनले आफ्नो नामसमेत अनकनाएर भन्न सके । आमाबुबाको नाम र ठेगाना उनले बिर्सिसकेका छन् । उनले आफ्नो गाउँको ठेगानाबारे सानोमा […]
कुखुरालाई आठ महिना जेल । पुरा पढनुहोस
March 9, 2021 adminLeaveaComment on कुखुरालाई आठ महिना जेल । पुरा पढनुहोस
काठमाडौँ– कुखुरालाई पनि जेलमा राखिन्छ भन्दा भन्ने सुन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, यो घटना वास्तवमै सत्य हो । पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तकोघोटमी जिल्लामा एक कुखुरोलाई आठ महिना जेलमा राखिएको छ । एक स्थानीय अदालतले उक्त कुखुरोलाई आठ महिनापछि जेलबाट रिहा गरेको हो । आठ महिना अगाडि लडाइँका बेला केही मानिससहित केही कुखुरालाई पनि गिरफ्तार […]
March 8, 2021 adminLeaveaComment on म ३३ बर्षकी सिगंल हुँ,मलाई फोनमा बोल्ने,शा’री’रिक सुख दिनसक्ने केटा साथी चाहीयो
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्।यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्। कसैका लागि […]
March 8, 2021 adminLeaveaComment on बिहेमा बेहुली रुँदा-रुँदै हृदया’घात भएर मृ’त्यु । rip पुरा पढनुहोस
विवाह कार्यक्रम सकि एपछि बेहुलीलाई अन्मा’एर विदा गर्ने बेला नवविवाहिता बेहुलीको मृ त्यु भएको दुखत खबर सार्वज:निक भएको छ । ती बेहुली विदाइका बेला अत्या’धिक रोए’का कारण उनलाई रुँ’दारुँदै हृदया’घात भएर मृ त्यु भएको विश्वास गरिएको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****** शुक्रबार बिहान भारतको ओडिशा राज्यको सुवर्णपुर […]
काठमाडौं । नेपालीमा छोरी भन्दा आमा त’रुनी भन्ने भनाई खुबै चर्चित छ । यस्तै एक घटना अहिले बाहिर आएको छ । मानिसहरु नाता सम्बन्धलाई एकातिर राखेर सम्बन्धको भूमिका निभाउन बिर्सिन थालेका छन । कहिले छोराको बिहे हुनै लाग्दा सम्धिले सम्धिनी भगाउछन त कहिले सासु ज्वाई टिपेर फरार हुन्छिन । ढुक्क हुनुहोस यो घटना नेपालको भने […]
यस्तो छ बलात्कारि बाट बेचाउने पेन्टी पुरा पढनुहोस।
February 21, 2021 adminLeaveaComment on यस्तो छ बलात्कारि बाट बेचाउने पेन्टी पुरा पढनुहोस।
भारतकी एक युवतीले यस्तो पेन्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई ब’ला’त्का’रबाट बचाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फ’रुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् ।उनले बनाएको ‘रे’प प्रुफ पे’न्टी’मा एक प्रकारको ल’ग लागेको हुन्छ, जसले ब’ला’त्कार’बा’छ बचाउनसक्छ । ब्ले’ड प्रु’फ कपडा प्रयोग गरिएको छ, जसलाई का’ट्न वा जलाउन सकिँदैन । साथै स्मार्ट लक, […]